China Triple Wavelength 755 810 1064 အမြဲတမ်း Diode လေဆာရောင်ခြည်ဖယ်ရှားစက်စက်နှင့်ထုတ်လုပ်သူများ KEYLASER
Triple Wavelength 755 810 1064 အမြဲတမ်း Diode Laser ဆံပင်ဖယ်ရှားစက်
ICELEGEND အသစ်သည်စွမ်းအားမြင့် diode laser platfom ဖြစ်ပြီးလှိုင်းအလျားသုံးဆနှင့်ပိုမိုကြီးမားသောအစက်အပြောက်အရွယ်အစားလက်ကိုင်များနှင့်တပ်ဆင်ထားသည်။
Coolite BOLT သည် Ultra Short Pulse နှင့် High Peak Power ကို အသုံးပြု၍ အမြန်နှုန်းနှင့်လျှပ်တပြက်မြန်ဆန်သောဆံပင် follicles ကိုပျက်စီးစေရန်တိုတောင်းသောပဲများပို့ပေးသည်။
Diode လေဆာရောင်ခြည်ဖယ်ရှားရေး -16
မူပိုင်ခွင့်ရရှိထားသော Dual Cooling Engine ဒီဇိုင်းသည်ကြာရှည်စွာအလုပ်လုပ်နိုင်ခြင်း၊ အရေပြားမျက်နှာပြင်အားလောင်ကျွမ်းခြင်းနှင့်အန္တရာယ်ကင်းကင်းကင်းစွာသက်တောင့်သက်သာရှိစေခြင်း။
အလင်းရင်းမြစ် Diode လေဆာ
လှိုင်းအလျား 808nm / 808nm + 755nm + 1064nm
စစ်ဆင်ရေး Interface ၁၀.၄ လက်မ LCD Touch Screen
အစက်အပြောက်အရွယ်အစား 12 * 12mm 12 * 16mm
အအေးစနစ် TEC လေအေးပေးစက်အအေး + ရေအေး + လေ
၁. ၁၀.၄ လက်မအရောင်ထိ LCD မျက်နှာပြင်၊ ဘာသာစကားအမျိုးမျိုးရွေးနိုင်သည်။
2. ဂျာမနီ diode လေဆာဘားတင်သွင်း။
၄။ ဂျာမနီသည်ရေစုပ်စက်၊ ဆူညံသံ၊
၅။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဆံပင်ကျွတ်မှုကိုဖယ်ရှားခြင်း Golden Standard
၆။ TEC သည်အအေးခံ။ ၂၄ နာရီရပ်တန့်ခြင်းမရှိဘဲအလုပ်လုပ်သည်။
၂၀၀၇ ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး KEYLASER SCI-TECH Co. , ltd ။ , ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိဆေးဘက်ဆိုင်ရာစက်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်သူသည်ပလပ်စတစ်ခွဲစိတ်ဆရာဝန်များ၊ အရေပြားအထူးကုဆရာဝန်၊ ဆေးသမားနှင့်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပညာရှင်များအတွက်အဆင့်မြင့်ထုတ်ကုန်များကိုထုတ်လုပ်သည်။
ရှေ့သို့ လေးလှိုင်းအလျား diode လေဆာဆံပင်ဖယ်ရှားရေး sysyem
နောက်တစ်ခု: အောက်ဈေးနှုန်းအိတ်ဆောင် 808nm Professional Soprano ကိရိယာဆေးဘက်ဆိုင်ရာပစ္စည်းအလှအပစက် Diode IPL Shr Elight လေဆာရောင်ခြည်ဆံပင်
755 1064 808nm Diode Laser ဆံပင်ဖယ်ရှားရေး
808nm Diode Laser ဆံပင်ဖယ်ရှားရေး Diode Laser
810nm 1000w Diode Laser Hair Removal လုပ်သည်
Diode Laser ဆံပင်ကိုဖယ်ရှားလိုက်ပါ
အိတ်ဆောင် Mini Diode Laser 808 Hair Removal